Faah faahin:- Koox hubeysan oo weerar culus ku qaaday xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Koox hubeysan oo weerar culus ku qaaday xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa iska hor-imaad aad u culus oo habeenkii xalay dhexmaray koox hubeysan oo weerar kusoo qaaday xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee magaalada Muqdisho iyo ciidamo ka tirsan kuwa militeriga ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Koox hubeysan oo wadatay gaari ayaa habeenkii xalay weerar aad u culus kusoo qaaday xarunta wsaaaradda gaashaandhiga, halkaas oo laga maqlay rasaas xoog leh oo ay is-weydaarsadeen ciidankii ilaalada ka aheyd wasaaaradda iyo kooxihii weerarka soo qaaday.
Dagaalkaasi oo socday ku dhawaad muddo 30 daqiiqo ah ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana kooxihii weerarka soo qaaday markii dambe lagu qasbay inay dib u gurtaan.
Saraakiisha ciidanka militeriga dowladda federaaalka Soomaaliya ayaa ku amray ciidamada militeriga inay eryadaan kooxihii weerarka kusoo qaaday xarunta wasaaradda gaashaandhiga, isla-markaana ay gacanta kusoo dhigaan.
Illaa iyo haatan si rasmi ah looma oga qasaaraha ka dhashay weerarkaasi, balse iska horimaadkaan ayaa ayaa ahaa kii ugu horeeyay oo muddo sanado ah lagu qaado xarunta wasaaradda gaashaandhiga oo ku taalla wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Dayniile Axmed Nuur Cabdi Siyaad oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in kooxaha weerarka soo qaaday ay ahaayeen illaa 6 qof oo ku hubeysnaa qoryaha garbaha laga rido iyo sidoo kale hubka culus.
Lama oga qasaaraha soo kala gaaray labada dhinac, waxaana markii dambe goobta ka baxsaday kooxihii weerarka kusoo qaaday xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee ku taallo wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho.